Baro Qaab Fudud oo adigoo Gurigaaga Joogo aad lacag Xalaal ah Ku sameyn kartid, Waa Maxaay Adeegga Forex? [Warbixin+Video]. – Shabakadda Amiirnuur
January 22, 2019 10:25 am by admin Views: 99
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdishu kusoo kordhay ganacsi cusub oo lagu magacaabo FOREX Trade afka Soomaaliga ahna lagu yiraahdo Sarrifka lacagaha qalaad ee Internetka,hadaba waxaan akhristayaasheena usoo gudbineynaa sharraxaad kooban oo ku saabsan ganacsiga Forex Trade.
Ganacsigaan waxaa lagu kala badalaa lacagaha qalaad markaad joogto FOREX waxa kaliya ee muhiimadda leh waa inta ay is dheeryihiin lacagaha la isku sarrifayo, iimaha wax lagu sarrifayo waxaa ku dhici kara is badal degdeg ah, waxaa suurtagal ah in hal daqiiqo gudihiis uu dhowr jeer isbadalo sidaas darteed 24 ka saac dhowr jeer ayuu is badalaa.
Ganacsigaan wuxuu leeyahay wax layiraahdo BUY RATE iyo SELL RATE Oo aan Afsoomaali ahaan u adeegsan doono XADDIGA SOO IIBSASHADA iyo XADDIGA ISKA IIBINTA. Hal tusaale aan soo qaadano, waxaad go’aansatay in aad 1,000 Euro kusoo iibsato dollar Kasoo qaad markasta oo Dollar lagu IIBSANAYO Euro, xaddiga soo iibsashadu in uu yahay 1.4500. Micnaha 1kii Dollar wuxuu lamid yahay 1.4500 Euro. Sidaas darteed 1,000 Euro ah waa ku gadaneysaa $1,450 Dollar.
Sidaan kusoo aragnay Tusaalaha kor ku xusan 1,000 Euro-ga ah waxaan kusoo iibsannay $1,450, Sidoo kale markii hore waxaan sameynay soo Iibsasho, hadda waxaan iskasii Iibineynaa Euro-gii aan soo iibsanay. Xadiga ISKA IIBINTA ee 1-kii Euro waxaan kasoo qaadeynaa in uu yahay 1. 5500. Sidaas darteed 1,000 Euro wuxuu noqonayaa $1550. Hada waxaan fa’iidnay $105 Dollar. Dhinac kale ee khasaaraha haddaan ka eego, Xaddiga iska sii iibinta wuxuu noqon karaa 1.3500. Haddii aad 1,000 hadda iska sii iibisid waxaad heleysaa $1.350 Dollar, sidaas ayaad $100 ku qasaartay. Marka la joogo ganacsiga FOREX sidaas ayaa loo faa’iida ama loo khasaaraa!
Haddaba waxaaan baranay sida uu u shaqeeyo ganacsiga Forex iyo sida lacag looga sameeyo maadaama aan Ummad Islaam ah nahay waxaa lama huraan ah in aan is weydiino xalaalnimada ganacsigaan marka laga eego xagga shareecada Islaamka.
Sida Culimo badan oo Sidiiqiin ah ay xaqiijiyeen ganacsigaan waa xalaal oo wuxuu laazimay shuruudihii laga rabay beeca xalaasha ah ee wax kala gadashada wuxuuna ka badbaaday wixii ka dhigay xaraan ama ribo.
Hoos ka daawo Sheekh Xasaan Xuseen oo si waafi ah uga hadlaya arrintan ama halka ka degso